Ndị Rom 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 Ya mere, ebe a kpọworo anyị ndị ezi omume n’ihi okwukwe,+ ka anyị na Chineke dịrị n’udo+ site n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst,
2 onye anyị sikwa n’aka ya bata+ n’obiọma a na-erughịrị mmadụ, nke anyị guzo na ya ugbu a site n’okwukwe; ka anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ, n’ihi olileanya+ nke inweta ebube Chineke.
3 Ọ bụghịkwa naanị nke ahụ, kama ka anyị na-aṅụrị ọṅụ mgbe anyị nọ ná mkpagbu,+ ebe anyị maara na mkpagbu na-arụpụta ntachi obi;+
4 ntachi obi arụpụta ọnọdụ dị Chineke mma;+ ọnọdụ nke dị Chineke mma arụpụta olileanya,+
5 olileanya ahụ adịghịkwa eduga ná mmechuihu;+ n’ihi na a wụsawo ịhụnanya nke Chineke+ n’obi anyị+ site na mmụọ nsọ+ nke e nyere anyị.
6 N’ihi na, n’ezie, mgbe anyị ka bụ ndị na-adịghị ike,+ Kraịst nwụrụ n’oge a kara aka maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke.+
7 N’ihi na o siri ike mmadụ ọ bụla ịnwụ maka onye ezi omume;+ n’ezie, ọ bụ maka ezi mmadụ ka mmadụ+ ga-anwa anwa nwụọ ma eleghị anya.+
8 Ma Chineke mere ka anyị mata ịhụnanya+ ya, n’ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n’ihi anyị.+
9 Ya mere, ebe a kpọworo anyị ndị ezi omume ugbu a site n’ọbara ya,+ a ga-esite n’aka ya zọpụta anyị n’ọnụma ọbụna karị.+
10 N’ihi na ọ bụrụ na, mgbe anyị bụ ndị iro,+ e mere ka anyị na Chineke dị ná mma site n’ọnwụ Ọkpara ya,+ a ga-azọpụta anyị ọbụna karị site ná ndụ ya, ebe e meworo ka anyị na ya dị ná mma.+
11 Ọ bụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n’ime Chineke site n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye mere ka anyị na Chineke dị ná mma ugbu a.+
12 N’ihi ya, dị nnọọ ka mmehie si n’aka otu mmadụ+ bata n’ụwa, ọnwụ+ esikwa ná mmehie bata, ọnwụ wee si otú ahụ gbasaa ruo mmadụ niile n’ihi na ha niile mehiere+—.
13 N’ihi na mmehie dị n’ụwa tupu Iwu ahụ, ma a dịghị agụrụ onye ọ bụla mmehie mgbe iwu na-adịghị.+
14 Ka o sina dị, ọnwụ chịrị dị ka eze malite n’Adam ruo na Mozis,+ ọbụna chịa ndị na-emeghị mmehie nke yiri mmebi iwu Adam,+ bụ́ onye yiri onye ahụ nke gaje ịbịa.+
15 Ma ọ bụghị otú onyinye ahụ dị ka njehie ahụ dị. N’ihi na ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ nwụrụ site ná njehie nke otu onye, ọtụtụ ndị nwetara obiọma Chineke nke na-erughịrị mmadụ na onyinye o nyere n’efu, tinyere obiọma ahụ na-erughịrị mmadụ nke si n’aka otu onye+ ahụ bụ́ Jizọs Kraịst, ọbụna karị.+
16 Ihe onyinye+ ahụ e nyere n’efu rụpụtara adịghị ka ihe mmehie otu onye ahụ rụpụtara.+ N’ihi na ọ bụ otu njehie+ wetara ikpe ahụ nke rụpụtara amamikpe,+ ma ọ bụ ọtụtụ njehie wetara onyinye ahụ nke rụpụtara ịkpọ ụmụ mmadụ ndị ezi omume.+
17 N’ihi na ọ bụrụ na ọnwụ si n’aka otu onye+ ahụ chịa dị ka eze+ site ná njehie nke onye ahụ, ndị na-anata obiọma dị ukwuu nke na-erughịrị mmadụ+ na onyinye ezi omume dị ukwuu nke e nyere n’efu+ ga-adị ndụ wee chịa ọbụna karị dị ka ndị eze+ site n’aka otu onye ahụ, ya bụ, Jizọs Kraịst.+
18 Ya mere, dị nnọọ ka a mara ụdị mmadụ niile ikpe site n’otu njehie,+ otú ahụkwa ka e si n’otu omume ziri ezi+ kpọọ ụdị mmadụ niile+ ndị ezi omume ka ha wee nweta ndụ.+
19 N’ihi na ebe ọ bụ na e mere ka ọtụtụ mmadụ+ ghọọ ndị mmehie site ná nnupụisi nke otu onye ahụ, otú ahụkwa ka a ga-eme ka ọtụtụ mmadụ+ ghọọ ndị ezi omume+ site ná nrubeisi+ nke otu onye ahụ.
20 E mesịrị nwee Iwu+ ahụ ka njehie wee dị ọtụtụ.+ Ma n’ebe mmehie+ dị ọtụtụ, obiọma na-erughịrị mmadụ+ dị ọtụtụ ọbụna karị.
21 Ka gịnị wee mee? Ka obiọma na-erughịrị mmadụ+ wee chịa dị ka eze site n’ezi omume nke na-eduga ná ndụ ebighị ebi+ site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị, dị nnọọ ka mmehie na ọnwụ chịrị dị ka eze.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D45%26Chapter%3D5%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl